चितवनमा आज एकैदिन २४७ संक्रमित थपिए : कुन पालिकामा कति ? – Shasankhabar
चितवनमा आज एकैदिन २४७ संक्रमित थपिए : कुन पालिकामा कति ?
चितवन । चितवनमा विगत २४ घण्टामा २४७ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा १९१, खैरहनीमा ५, माडी नगरपालिकामा १३, रत्ननगर नगरपालिकामा २६, राप्तीमा ४, कालिकामा ६ र इच्छाकामनामा २ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
यो सँगै चितवनमा जम्मा कोरोना संक्रमितको संख्या १२ हजार १३५ जना पुगेको छ ।
चितवनमा विगत २४ घण्टामा थप १६ जनाको मृत्यु भएको छ ।आजसम्म चितवनमा १८६ जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । बुधबार चितवनमा संक्रमित २३५ जना थपिएका थिए भने मंगलबार यो संख्या मंगलबार २४९ जना थियो ।
अहिले चितवनका विभिन्न अस्पतालमा ५०९ जना कोरोना संक्रमितले उपचार गराइरहेका छन् । जसमध्ये २५९ जना आईसीयूमा, ६३ जना भेन्टिलेटरमा, ८९ जना एचडीयू र १६१ जनाको सामान्य बेडमा उपचार भइरहेको छ । विगत २४ घण्टामा ४७ जनाले कोरोना जितेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य कार्यालय जनाएको छ ।